Banyere Anyị - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd. emi odude ke Shijiazhuang Lvdao Development Mpaghara nke dị nso na Qingdao-Yinchuan Super Highway na ụzọ tricyclic gbara gburugburu. Shijiazhuang obodo bụ nkwụsị nke Beijing-Guangzhou, Shijiazhuang-Taiyuan, Shijiazhuang-Dezhou ụgbọ okporo ígwè. Yabụ njem ya dị mfe. E guzobere ụlọ ọrụ ahụ na 1991. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ izizi mepụtara Isolating switch in China.
Tupu 2008, ngwaahịa anyị bụ 110 kV na ọkụ ọkụ na-ekewapụ ala, yana mmepụta kwa afọ nke narị otu narị puku, a na-eme ya site na sịlịkọn roba na-enwu ọkụ ma mepụtara ya site na ndị ọkachamara roba, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na ntanetị site na afọ asaa. nyocha na nyocha. Ngwaahịa a, nke mepụtara ndekọ na ikike naanị. Mgbe ụlọ akwụkwọ Wuhan High-Voltage Research Institute State Grid Corporation nke China nwalere ya, National Center for Quality Supervision and Test of Insulator and Surge Arrester, site n'ụkpụrụ mba GB11033, GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-1999, ngwaahịa a abụla weere na ya ruru eru iru ụkpụrụ ala n'akụkụ niile.
N'ime ndị ọrụ 256 niile, ndị nwere asambodo doctorate ma ọ bụ nke nzere bachelọ maka 7. “Nọgidesie ike na ihe ọhụụ; Chọọ maka ọganihu teknụzụ; Tụkwasịnụ na elu mma ngwaahịa ”bụ anyị echiche mgbe niile.
Companylọ ọrụ anyị anọwo na-eduga n'ụlọ n'ụlọ ya na njikwa jikwaa nkwalite ọgbara ọhụrụ, ike ọrụ ike, mepụta njikwa sayensị wee mezuo ihe ISO9001 chọrọ.:2000 ọkọlọtọ, zuru ezu mma na iru eru akwụkwọ, elu ule Usoro na mma mgbe-ọrụ.
Na-atụ anya inweta nkwado gị na nso nso.
Hụrụ uto anyị
Ruo afọ 10, ụlọ ọrụ anyị na ike grid na-ewu ụlọ ma na-eweghachi ihe na-enye ọtụtụ nde eriri akwa na ngwaahịa ndị ọzọ na-akwado. mgbe 1998 ụlọ ọrụ nnyocha na mmepe 500kV na ala voltaji mejupụtara insulators, 35kV na ala voltaji zinc oxide anya arrester, iche iche mgba ọkụ, dropout fuuz, electric substation bọs-mmanya tube, wụsịrị booster, USB n'ọbọ voltaji limiters (igbe), mgbidi bushing, wdg. ọ ghọtara ngwaahịa eletrik site na nrụgide dị ala na nrụgide dị elu na mgbanwe nrụgide ultrahigh. ; site n'alụghị di ma ọ bụ nwunye na iche iche, na-egosipụta ụlọ ọrụ ahụ maka ọdịnihu, iji mepụta usoro ọrụ zuru oke nke ndị ọrụ bụ ụgbọ okporo ígwè echiche. Ma nye onyinye dị ukwuu maka ike eletrik, ụzọ ụgbọ oloko, mmanụ ala, ebe a na-egwupụta kol na nnukwu ụlọ ọrụ na-eweta ike nchekwa nchekwa.
Ngwaahịa ndị isi bụ: 220kV na voltaji zinc oxide na-agba ọsọ, na-ekewapụ ọkụ, nkwụsịtụ nkwụsị, ọkpọkọ ụgbọ ala eletrik, wụsara nkwalite, Ogwe ọkụ ọkụ n'ọbọ (igbe), mgbidi bushing, 110kV na obere ndọtị voltaji, Igwe oyi na-atụ oyi. ma ọ bụ okpomọkụ shrinkable USB ngwa, 500kV na ala voltaji mejupụtara insulator wdg iche iche iche iche nke eletriki na ngwaahịa.
N'oge na-adịbeghị anya anyị na-amalitekwa obere ngwa ngwa USB (usoro 100, oge nnyefe bụ ụbọchị 15), insulator (630 iberibe, oge nnyefe maka ụbọchị 15), ịwepu ịgbanwee (otu 300, oge nnyefe maka ụbọchị 45) azụmaahịa, ikike imepụta nke saturation degree bụ 40%, ikike ibido ihe a na-arụpụta ihe.